China Polyethylene Glycol 4000 Peg4000 ifektri abakhiqizi | Yinuoxin
I-Polyethylene Glycol 4000 Peg4000
I-PEG-4000 isetshenziswa kuthebhulethi, i-capsule, ifilimu, iphilisi eliwisayo, i-suppository, njll
I-PEG-4000 ne-6000 isetshenziswa njengezikhangiso embonini yezemithi, ukulungiswa kwe-suppository nokunamathisela, i-ejenti yokumboza embonini yamaphepha ukukhulisa ukucwebezela nephepha elibushelelezi, okufakwayo embonini yenjoloba ukukhulisa ukuthambisa nokuqina kwemikhiqizo yenjoloba, ukunciphisa ukusetshenziswa kwamandla ekusetshenzisweni nokwelula impilo yempilo yemikhiqizo yenjoloba.
Ingasetshenziswa njenge-matrix embonini yezokwelapha nezimonyo ukulungisa i-viscosity nephuzu lokuncibilika, i-lubricant ne-coolant kwimboni yokucubungula ngensimbi, i-dispersant ne-emulsifier ku-pesticide kanye ne-pigment industry, i-antistatic agent kanye ne-lubricant embonini yendwangu.
Ngenxa yobuningi be-PEG kanye nekhono layo lokukhipha izidakamizwa, isisindo esiphakeme se-PEG (PEG4000, PEG6000, peg8000) siyasiza kakhulu njengesinamathelisi sokwenza ithebhulethi. Isikhonkwane singenza ubuso bamathebulethi bucwebezele futhi bushelelezi, futhi kungabi lula ukulimala. Ngaphezu kwalokho, inani elincane lesisindo samangqamuzana aphezulu i-PEG (i-PEG4000, i-PEG6000, i-peg8000) ingavimbela ukunamathela phakathi kwamaphilisi agcwele ushukela naphakathi kwamabhodlela.
Ukubukeka （25 ℃）
Indawo yokuqinisa ℃
Okuqukethwe kwamanzi （%）
1% Isisombululo esimanzi）
UMilky White uqinile
I-5.0 ～ 7.0
Lolu chungechunge lwemikhiqizo luvame ukuncibilika emanzini kanye namakhemikhali awuketshezi ahlukahlukene, kepha awancibiliki kuma-hydrocarbon e-aliphatic, i-benzene, i-ethylene glycol, njll. Angeke i-hydrolyze futhi yehle. Inokuqina okuhle kakhulu, ukuthambisa, ukuswakama kwamanzi, ukugcinwa komswakama, ukunamathela nokuqina kokushisa. Ngakho-ke, njenge-lubricant, moisturizer, dispersant, adhesive, sizing agent, njll. Ekhemisi, izimonyo, iraba, amapulasitiki, amakhemikhali fiber, ukwenza iphepha, upende, i-electroplating, i-pesticide, ukucubungula insimbi, ukucubungula ukudla nezinye izimboni kusetshenziswa kabanzi.
Ukupakisha Imininingwane:uketshezi lwangempela olungama-230kg oluhlanganisiwe. Ukupakisha kwesikhwama sephepha esiqinile se-25kg Kraft.
Isitoreji:Lo mkhiqizo ungahanjiswa ngokuya ngeGeneral Chemicals. Gcina endaweni eyomile nenomoya ukugwema ukukhanya kwelanga nemvula.
Amazwi:inkampani yethu iphinde inikeze izinhlobo ezahlukahlukene zemikhiqizo yochungechunge lwe-PEG.
Langaphambilini I-Polyethylene Glycol 3350 Peg3350
Olandelayo: I-Polyethylene Glycol 6000 Peg6000
Uchungechunge lwe-Jiaoyisan Pr-85 lwe-Additive Dispersant Series
Isikhunta Yijie R-90 Yangaphakathi lengetiwe Isikhunta Khipha ...